Umurii 45'tti suuta deemuun 'mallattoo dullumaati' jedhame - BBC News Afaan Oromoo
13 Onkololeessa 2019
Namoonni umurii jiddu galaa isaaniitti suuta jedhanii adeeman mallattoo sammuu fi qaamnisaanii dafee dulloomaa jiraachuu kan argasiisuudha jedha qorannoon tokko.
Qorannichi saamuda saffisa olaanaati fayyadamuun adeemsa dulummaarrati qorannoo gaggeesaniiru.
Kanaafuu umurii 40n keessatti daftanii kan hintarkaanfannee yoo ta'e, sammuufi qaamni keessan attamiin dulloomaa jiraachu agarsiisa jedhu qorattoonni.
Kana malees namoota akkasii fulli isaaniis dulloomusaanii ifatti kan himu yoo ta'u, dandeettiin sammuun isaaniis ni xiqqata.
Timaatimiin attamiin dandeettii dhalchuu dhiiraa foyyeessa?
Gareen idil addunyaa kunis 'argannoon qoranichaa' baayyee dinqisiisadha jedheera.
Hakiimoonni kunneenis saffiisa imalaa kan safaran fayyaa walii galaa namootaa baruufiidha.
Keessattuu namoonni umuriinsaanii waggaa 65 olii wayita taa'aniitti haalli cimina riiphusaanii, fayyina soombaa, madaalli saanii eeggachuufi dhiisuusaa, cimina lafee duggugguruu akkasumas nageenya agartuu ijaa ni sakkatta'ama.
Suutaan demuun kan umurii waliin walqabatee dhufu yoo ta'u, dhukkuboota umuriin walqabatanii dhufan kan akka dhukkuba irraanfachuutiin walitti hidhama qaba.
Qorannoo kana keessatti, lammiileen Niiwu Zilaand kuma tokko keessatti hirmaataniiru. Umuriin namoota qorannichaan hammatamanii 45 yoo ta'u, isaan irratti safarriin tarkaanfii imalasaanii kan jalqabaa, fi kan jiddugala gaheessummaa hordofameera.
Hirmaattoonni qorannoo kanaas qorannoo ciminaa fi nageenya qaamaa, akkasumas wayita ijollee turanitti ammoo waggaa lama lamaan qormaata maddaallii guddinaa cimina sammuu fudhataniiru.
"Qorannoo kanaan akka bira geenyeettis, namoonni suuta adeeman kanneen umurii isaanii dura dulloomaniidha,'' jedha pirofessarri Teerii Mofat kan qorannicha adda durummaan gaggeessan.
Namoota umurinsaanii waggaa 45 ta'e jidduutti mataasaa garaa garummaan tarkaanfii jiraachusaa kan dubbatan oggeessi kun namni saffiisaan garuu sakandii tokko keessatti meetira afuri deemu danda'a jechuun kunis figiicha akka hintaane hima.
Walumaa galattis, namni suuta adeemu 'atattamaan kan dulloomaa jiru' ta'usaatiif mallatoodha kan jechuun, namoonni akkasiis sombiisaanii, ilkaan, fi sirna dandeetii dhukkuba ofirrraa ittisu isaani kan kanneen ariitiin deeman gadii qabu jedhera qorannichi.
Goodayyaa suuraa Qorannichis imala hirmmaattotaa metira 8 irratti safare
Qorattoonni kunneenis nama waggaa 45 maaliif suuta akka adeemu ijoollummaa isaanii waggaa sadii irraa kaasuun hordoffii taasisuun dandeettii sammuu sakkata'uun, qormaata afaanii kannuun dursanii dulloomuu eegalusaanii adda baasuun ni danda'ama jedhaniiru.
Namoonni dafanii dullooman kunneenis ijoollummaa isaanii kaasanii mallattoo dullummaa ni agarsiisu jechuun haala jireenyaa ofii sirreessuun ammoo kanaaf fala ta'u gorsu.
Fayyaa: Cuunfaan timaatimaa attamiin dandeettii dhalchuu dhiiraa foyyeessa?
Qondaalli mootummaa Wallagga Lixaatti ajjeefaman
Google beeksiisawwan siyaasaa dhorkuuf
Boba'aa Siiriyaa eenyutu to'ataa jiraa?